Ukuqokelela itekhnoloji-iindaba-i-NingBo COFF oomatshini Co., ltd
Iphakheji kunye nokuhanjiswa
I-Fermenter / itanki ye-Uni
I-Tank eBher Bright
Inkqubo yasekhaya yokuThambisa kunye nePilot
Hop Buyela / CIP
Ubushushu kwiBrewhouse yeBrewhouse yeThermal
Indawo yokutyela iMicrobrewery
Iitanki ze-60BBL Fermentation kunye ne-60BBL Beer Brite Tanks zathunyelwa eChicago, eU.SA.
I-odolo yoMthengi we-Nagano yaseJapan ye-200L yenkqubo yokufudumeza i-oyile ye-oyile igqitywe ngokugqibeleleyo.
I-10BBL 20BBL 40BBL fermentors kunye neetanki zebhiya brite ziya kuthunyelwa eDenver, eU.SA kungekudala.
I-200L yokufudumeza ioli yeBrewhouse Systems iya kuthunyelwa eNagano Japan
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 52
Ukuphisa kukuphuma kwebhiya ngokugcina istarch source (ngokuqhelekileyo iinkozo zesiriyeli) emanzini emva koko kubiliswe igwele. Igqityiwe ngotywala ngumenzi, kwaye urhwebo lokuthengisa luyinxalenye yoqoqosho olusentshona. Ukuphisa kwenzekile ukusukela ngewaka lesithandathu leminyaka BC, kwaye imikhondo yezakudala icebisa ukuba le ndlela isetyenziswe kwimiphakathi emininzi esakhulayo ebandakanya i-Egypt ne-Mesopotamia endala kakhulu. Inkqubo yokubilisa: Kukho amanyathelo athile kwindlela yokwenza utywala, enokuthi ibandakanye ukungcola, ukujija, ukugalela, ukubilisa, ukubila, ukumisa, ukucoca kunye nokusonga. Ukunyibilikisa yindlela yeenkozo zerhasi eyenziwayo ukulungiselela ukupheka. I-Mashing iguqula ii-starches ezikhutshwe kwinqanaba lokunyibilikisa zibe ziiswekile ezinokuvundiswa.
Iziphumo zendlela yokugungxula kukufuma okunezinto ezineswekile okanye iwort, ethi ke ixineke kwisiseko se-mash tun ngendlela eyaziwa ngokuba yi-lautering. I-wort isiwa kwisitya esikhulu esaziwa ngokuba yi "copper" okanye iketile apho ithi idityaniswe nokuxhuma kwaye ngamanye amaxesha ezinye izinto ezinje ngamayeza okanye iswekile. Eli nqanaba kulapho uninzi lweekhemikhali kunye noomatshini benzeka khona, kwaye apho kukho utshintsho olubalulekileyo malunga nencasa, umbala, kunye nevumba lebhiya. Emva kwe-whirlpool, i-wort emva koko iqala indlela yokubanda. Indlela yokubila iqala ngokudibanisa igwele kwi-wort, apho iswekile zijika zibe butywala, icarbon dioxide kunye nezinye izinto.
Xa ukubila kugqityiwe, umenzi weebhiya unokufaka ibhiya kwitanki elitsha, elibizwa ngokuba sisiqulathi semeko. Ukumiswa kwebhiya yindlela apho ibhiya idala khona, incasa iba mpuluswa, kunye neencasa ezingafunekiyo zichithe. Emva kokumisa imeko iveki ukuya kwiinyanga ezithile, ibhiya inokucocwa kwaye inyanzelwe ikhabhoni yibhotile, okanye ihlawuliswe kwimeko. Ngeemveliso: Ukukhupha igwele kunye nokutya okusanhlamvu
Previous: Ubhiya wobugcisa buye bathandwa e-China
Okulandelayo: Nokuba ii-nerds zebhiya zinokufunda okuthile kukhenketho lwebhasi ye-Bitter Minnesota
60BBL Iitanki zokuvundisa kunye...
Iodolo yabaThengi baseNagano Japan...
10BBL 20BBL 40BBL fermentors...
COPYRIGHT © 2022 Ningbo COFF oomatshini Co., ltd. ONKE AMALUNGELO AGCINIWE
I-logo ye-COFF yipropathi ye-NingBo COFF Machinery Co., ltd.